Izindaba | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
"I-Sunflower": izinhlobo ze-sunflower
I-sunflower ingenye yezitshalo ezibonakala kakhulu, hhayi kuphela ngenxa yokubukeka kwayo okuhle nokugqamile, kodwa futhi njengomthombo wamafutha omquba. Okusemandleni kwalesi siko asikakhululwa ngokugcwele, okwenza kube lula ukukhiqiza izinhlobo ezintsha ezintsha ezedlulela abadala ngokulandela izinkomba.
Izitshalo eziyi-10 ezithandwa kakhulu egumbini lokuphumula
Usayizi omkhulu wegumbi lokuphumula kwenza kube lula ukubeka inamba enkulu yezitshalo zasendlini kuyo. Yiluhlobo luni lwabameleli be-flora alitholakali egumbini lokuvuna. Lapha ungabona nemithi yesundu, futhi i-dracaena ephakeme nezinye izitshalo ezingabonakali ukuthi abanikazi babo abazange babheke ukuthi kuyadingeka ukufaka kwamanye amakamelo.
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ezihamba phambili zamasimu nabalimi
Ukukhula kwezitshalo ezihlotshaniswayo nezitshalo nezitshalo sekuye kwaba okuzilibazisa okuthandayo kwezigidi zabantu. Omunye wabalimi bafaka umzamo omkhulu ukuze benze isivuno sabo sibe ngcono kunabanye. Ngenkathi yobuchwepheshe obuphezulu bokuziswa, izincomo eziningi kanye namathiphu awusizo ekutshaleni izitshalo zingatholakala ku-inthanethi.
Imithetho eyishumi ebalulekile yokutshala utamatisi
Abalimi abanokuhlangenwe nakho banezindlela zabo zokupheka zamatamatisi okhula ngempumelelo, konke okuhlukile. Futhi kungakhathaliseki ukuthi wabelana kangakanani ngalezi zokupheka, wonke umuntu uzothola okuthile okusha kubo ngaphezu kokunqoba kwabo. Amathiphu angezansi aqiniseke ukuthi abe yisimo esisha somphumela omuhle. Ukuhamba ngendlela elula kodwa ehamba kahle, ngisho nomuntu oqalayo uzothola umphumela omuhle.
Amathiphu ama-10 abalimi abanobuhle noma indlela yokwenza i-cottage indawo yokuphumula?
Kwenzeke kaningi kangakanani uma ufika ekothishi ukuze uphumule futhi ngenxa yalokho, zonke izinsuku ezilandelanayo wenza kuphela ibhizinisi futhi ugibele engadini? Abaningi banenkinga efanayo, nakuba ezweni ngingathanda ukuphumula futhi ngijabulele ukuthula. Okulandelayo, sibheka amathiphu angasiza ukuvuselela futhi ukuguqula i-cottage yakho ukuze lesi sikhala senziwe ekuqaleni sokuzijabulisa.
Imibono engu-12 yokuhlela ikhoneni elihle e-cottage yakho
Ingabe i-cottage yakho ayinakho indawo ethokomele yokuphumula, noma ngabe unqume ukunikeza isayithi esivele selikhona i-charm entsha? Sinikeza wena ukuba ujwayele imibono ezithakazelisayo, ngenxa yokuthi konke kuthatha isikhathi esincane, imali nemizamo. Umphumela uzoba mkhulu - ngisho nekhoneni elingasondelene kakhulu, ongazange ucabange njengendawo ewusizo, kungaba yindawo enhle yokuzilibazisa.
6 imicabango engavamile kaningi mayelana nendawo yokukhosela nokulungiselela ama-roses ebusika
Lapho ukhula ngama roses emgumbini ophakathi ekwindla, kubalulekile ukulungiselela lezi zilimo zembali ebusika. Kodwa lokhu kufanele kwenziwe ngendlela efanele, ngokulandela izincomo zabachwepheshe abanolwazi olunzulu kakhulu. Kodwa-ke, abalimi abaningi bavame ukwenza okungalungile. Abantu badukiswa yizinganekwane ezivamile ngokulungiselela ama-roses ngenkathi ebandayo.
Imfihlo 10 yamakhukhamba okufakwe emanzini anosawoti kanye namaqanda
Etafuleni lokugubha, ikhukhamba eqoshiwe ihlala endaweni ehloniphekile. Abesifazane besifazane abaningi bayazi ukuthi ukulungiselela imifino ehlobo kulula, kodwa abaningi lo mqondo uphela ekuhlulekeni. Ngakho-ke, kufanelekile ukwazi izimfihlo eziphumelelayo. Imithetho yokukhethwa kwemifino Qaphela ezihlukahlukene. Izintandokazi, Nezhinsky, uMncintiswano, i-Murom, i-Nosovsky, i-Era, isiteji, i-Cascade, i-Voronezhsky, i-Altai, i-Beregovoi, i-Avangard, i-Vyaznikovsky 37 ngokuvamile iyakulungele ukuthola i-salting.
7 izitshalo ezinomnandi kakhulu zensimu yakho
Ukufika ezweni kusukela edolobheni elizimele ngemuva kwesonto lomsebenzi lijabulise kabili uma umoya ugcwele amafutha amnandi ezitshalo zezimbali. Iphunga elimnandi lizodlala indima ye-aromatherapy, ikusize uphumule, izokuvuselela, ithuthukise inhlalakahle yakho. Lapho izimbali, ama-shrub amaningi akhipha amafutha abalulekile ngephunga elimnandi.
Izinhlobo ezinhlanu zokwelashwa kwe-dacha noma ukushiya zonke izinkathazo esangweni?
Kwabaningi, iholidi lasehlobo liyathakazelisa futhi liwusizo ngisho naphezu kwehhotela. Phela, e-resort uhlala endaweni yangaphandle, futhi ekhaya lakho uzizwa ukhululekile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kunezindlela ezikuvumela ukuba wenze (futhi wenze) kusuka engadini yakho isikhala sokudala nokuphulukisa.
8 eziyisisekelo amaphutha balimi
Esigabeni sakho segadi ungenza izinqumo ezihlukahlukene. Lezi zinqumo zingakwazi ukufunda nokubhala ngokuphelele, futhi kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, kokubili kungenziwa. Ngakho-ke, ukuthola ukuthi ukungalungi okuyisisekelo okungakunakekelwa kubaluleke kakhulu kokubili kokuqala nomgadi wezithelo.
Iyini i-pergola futhi kungani kuyadingeka kusayithi?
I-Pergola - isakhiwo esikhethekile segadi. Igama lithathwe ngolimi lwesiNtaliyane, lapho lisho ukuthi "isandiso" noma "i-canopy". Kungenziwa njengokwakhiwa okuhlukile noma njengesandiso esakhiweni esikhulu (isibonelo, indlu noma ikhishi ehlobo). I-Pergola - into ephakathi kwe-lattice yokusekela abagibeli kanye ne-arbor garden.
Izinto eziyisisekelo zokwakha i-dacha
Endaweni yasemadolobhaneni ukuhlangabezana nakho konke okulindelwe ngabanikazi, kuzodinga ukuklanywa kwayo efanele. Le ndawo lapho sifuna khona ukuphumula emzini omuhle, futhi sisebenze ensimini nasemibhedeni yasensimu. Indlela yokuhlomisa umhlaba wakho, ukuze konke kukhululekile, kunengqondo futhi kukhululekile? Lena nje uhlobo oluthile lwesayensi.
Indawo yenkinga yokuklama: umthamo
Ngokuyinhloko, abanikazi bezindawo zanamuhla ze-dacha bathola la mazwe ngesikhathi besatshalaliswa ngisho nangesikhathi seSoviet Union. Ezikhathini zasendulo, abantu abazange bajabulele ikakhulukazi emazweni afaneleke kakhulu, ngoba ingxenye enkulu yayinikeza izinketho ezazingatholakali zokulima nezinye izidingo zezolimo. Kusuka lapha, eziningi zamasayithi zavela ukuthi zinomumo ongalingani kanye nemithambeko ehlukahlukene kanye nokuphakama.
I-Alpine Slide Alternative Engadini Yakho
Abalimi abaningi nabanikazi bezindlu zezwe bangathanda ukuba ne-alpine slide emangalisayo esakhiweni sabo. Ngeshwa, leli phupho elihle lingenye yezindleko ezibizayo ekubulaweni, ngakho-ke ngokuvamile akugcini. Kodwa abathandi bezingoma zomhlaba ngamatshe angokwemvelo akufanele bayeke futhi bashiye isifiso sokuhlobisa isakhiwo sakho - ngaphezu kwe-alpine slide ethandwayo kunezinye eziningi zensimu ze-rock, okungeyona into emangalisayo, kodwa engcono kakhulu yokwakha.
Ikhukhamba exotic "nomlingiswa" noma ikhule Momordica
Namuhla sibheka isitshalo esisodwa esiyingqayizivele. Inezakhiwo eziningi eziwusizo, ukunambitheka okungavamile, futhi kubizwa ngokuthi "i-Chinese gourd ebabayo". Iningi lalo liyaziwa ngaphansi kwegama elingavamile elithi "Momordika". Ngokufutshane mayelana nesitshalo seMamordica, empeleni, igama elivamile lenani elikhulu lezimila - imivini yonyaka nesikhathi eside.
Ukupheka ezweni: isobho iDevvga
Isosi ezibandayo ziyingxenye ethakazelisayo kakhulu yamasiko e-culinary. ERussia, abantu abaningi bayazi okroshka nesobho se-beetroot, eBulgaria isobho se-kefir siyaziwa. I-recipe ye-Dovgi ingumsoco we-kefir kuphela, kodwa hhayi kuphela lokhu okuthakazelisayo kuyo, kodwa futhi nethuba lokupheka nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Phela, izithako zihlale zikhona.
Indlela yokuhlala ingane ezweni?
Cottage - indawo enhle! Kanye nabantu abadala bajabulela imvelo kanye nezingane zethu. Ukuze bangabi nesithukuthezi, sinikeza imibono eminingana ezokwenza wonke amalungu amancane omndeni wakho ajabule kakhulu. I-agronomist encane Ngokuvamile, akulula ukuthi abantu abadala banikeze ingane encane encane engadini. Mnike amathuluzi aphephile, anikeze ukhetho lwezinhlobo zezitshalo zokunakekelwa okulula, akukhumbuze weeding ngesikhathi futhi ukuchelela.
Silungiselela imibhede yonyaka olandelayo: yini nokuthi kuphi?
Esinye sezikhathazo eziyinhloko sabalimi ekwindla yisidingo sokuhlela ukuthi kuzokwenzekani ngonyaka ozayo nokuthi uzokhula kuphi. Kuphi umbhede ohloswe ngamakhukhamba, nokuthi yikuphi - iklabishi, iyoxhomeka, isibonelo, ukukhulelwa ngesikhathi sokuwa noma ebusika izitshalo zikagalikhi no-anyanisi. Ake sibheke ukuthi ucabangisisa kanjani ngokujikeleza kwezitshalo esiqhingini.
I-Pomegranate Miracle Berry: Kungenzeka yini ukuba uyikhule e-cottage ehlobo emgwaqeni ophakathi?
Igromegranate yi-berry enkulu eseningizimu ekhula emazweni afudumele futhi evuthwa phakathi no-ekwindla. Kubhekwa njengophawu lokuzala, okuyinto engamangali: kunamakhulu ezinhlamvu ezincane ngaphansi kwesikhumba esiqinile sesithelo. Naphezu kokuthi igromegranate isitshalo esinothando lokushisa, kukhona abaningi abafuna ukuzama isandla sabo futhi bakhule le berry emangalisayo eRussia.
Umbono webhizinisi lakho: ukuthengiswa kwemikhiqizo enobungozi
Manje abantu bayaqaphela ukuthi ukusetshenziswa kwemikhiqizo yamakhemikhali engeyona yemvelo kuyingozi empilweni yabo. Isibonelo, emashalofini ezitolo ungathola ama-flavour, i-flavour enhancers, ama-flavour. Yingakho namuhla, umphakathi uzama ukuthenga imikhiqizo ephilayo. Ithembise kangakanani leli bhizinisi eRussia?
I-Hybrid yezinhlobo ezibomvu nezomuthi "Jabulela" - "Amagilebhisi e-Aladdin"
Izinhlobo ezidume kakhulu ze-havortiy, amagama azo nezithombe: iparele, mix, scaphoid nabanye
Kungani kuyingozi futhi yiziphi izimbungulu eziyingozi?
Ehlelekile engavamile - amagilebhisi "Giovanni"
Izinhlobonhlobo zamapheya "Bere Bosc": izici, izinzuzo nezingozi